I-Shuttle ye-Airport yeZurich neBasel-Ikhethekileyo kwaye ikhululekile
Ukuthunyelwa kwe-Airport eBasel
Ukudluliselwa kweenqwelo-moya kuZurich
Inkonzo yaseBasel yeLimousine
Inkonzo yeLimousine WEF Davos
I-Limousine Service Art Basel
KwiTeksi yaseBasel Airport
Inkonzo yemoto WEF Davos
Ukutshintshiswa kweSibhedlele seBasel
I-Shuttle ye-Airport yeZurich neBasel
Fika ngokukhuselekileyo kwaye ngokukhawuleza - ngeNkonzo yakho yokuThumela iNtlawulo yeeNkcazo
Ngaba uceba ukuhamba ngasese okanye kwishishini kwaye unomnqweno wokuqinisekisa ukuhamba kakuhle kunye ne-airport shuttle ngaphambi kokuba uhambe?
Umqhubi wethu uya kukukhetha ngomnye we-limousines ephakamileyo, e-Jamani esuka ekhaya, evela eofisini okanye esangweni le-moya. Kakade siya kukunceda ngomthwalo. Kakade ke, ukuba idiza yakho ifike emva kwexesha, asiyi kukuyeka kodwa silinde ukufika kwakho.
Fika ukhululekile kwaye ukhululekile kwindawo oya kuyo
Uninzi lwabagibeli bethu basebenzisa inkontileka yokuhanjiswa kweedoloji phakathi kweZurich Airport kunye ne-Euro Airport eBasel, njengoko uxhumano oluthe ngqo lugxina aluhambeli ngqo phakathi kweembambano ezimbini. Ukuze ugcine uhambo olungabonakaliyo lwebhasi okanye ukukhwela kweeteksi ezingaphezulu, ukukhetha kwi-shuttle yethu yesikhumulo sezindiza kuyisigqibo esifanelekileyo. Indawo yethu eBasel kumxantathu womda phakathi kweFransi, iSwitzerland kunye neJamani, nathi sinxulumane ngokufanelekileyo ukuba ufuna kwiimimousines zethu eziqhelekileyo kwiikhilomitha ze-70 kude neFriburg okanye uye ngqo ngqo eStuttgart okanye eMunich.
I-Airport Shuttle Zurich kunye neBasel - Inombolo: + 41 78 861 35 50
Njalo i-right sedan ekuqaleni
Ngaba uhamba njengomntu kwintlanganiso ebalulekileyo yezoshishino? Emva koko unako ukuhamba kwindlela ephumlekileyo, ukufika ngokuthembeka kwexesha-kwaye, ngokuqinisekileyo, ukuqonda kwethu kwe-100% ngexesha lakho lweefowuni zefowuni. Njengentsapho okanye iqela unemimousine emikhulu enokulahlwa kuyo, apho ungonwabela ukuhamba ngokukhululekile kunye ne-airport shuttle yethu kwiSwitzerland yethu enhle. Ukongeza kwokhuseleko kunye nokugcina ixesha, abaqhubi bethu banqwenela ukwenza uhambo lwakho lube mnandi ngangokunokwenzeka.
Incwadi yesikhenketho senqwelo-moya
Nceda usishiye ulwazi ngolusuku lwakho lokuhamba contactSizakuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza ukuba uxoxe ngeenkcukacha. Ungasifumana ngefowuni ku-41 78 861 35 50
Kuphawulwe: Basel moya Shuttle inkonzo yokuthuthwa Zuerich
taxi.flughafen NgoJanuwari 23, 2017 NgoJanuwari 23, 2017 Akohlulwanga Akukho gqabaza
← Ukuthunyelwa kweenqwelo-moya eBasel - ukuhamba ngokukhululekile eSwitzerland
Inkonzo yokudlulisa i-360 ° yeendwendwe zeehotele eBasel →
Copyright © 2018 , Unikwe WordPress, Umxholo: Ukhululekile ThemeGrill.